Zimbabwe opposition on deadline to appeal election result - World - Pulse.ng
Zimbabwe&apos;s defeated opposition faced a deadline Friday to file its legal challenge to try to overturn the July 30 election result, which has been mired in fraud allegations and a government crackdown on opponents.
The MDC party alleges that the vote result was rigged and President Emmerson Mnangagwa&apos;s narrow victory was due to a falsified vote count in Zimbabwe&apos;s first election since the end of Robert Mugabe&apos;s rule.
Mnangagwa, who is seeking to reverse Zimbabwe&apos;s economic isolation and attract desperately needed foreign investment, had vowed the elections would turn a page on Mugabe&apos;s repressive 37-year rule.
Mnangagwa of the ruling ZANU-PF party won the presidential race with 50.8 percent of the vote -- just enough to avoid a run-off against the MDC&apos;s Nelson Chamisa, who scored 44.3 percent.
In a joint statement, the EU, US, Canadian and Australian missions to Zimbabwe urged authorities to guarantee Biti&apos;s safety and human rights.
In Zimbabwe Opposition in court over post-vote violence
In Zimbabwe Opposition members in court over election violence
Emmerson Mnangagwa Zimbabwe president defends 'free, fair and credible election'
In Zimbabwe Opposition stronghold hushed after election loss
Nelson Chamisa Zimbabwe election result 'fraudulent, illegal, illegitimate': opposition chief